चीन स्कूटर electrics 13 इन्च 72v-84V 20000W इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता र आपूर्तिकर्ता | हाइबा
स्कूटर इलेक्ट्रिक 13 इन्च 72v-84V 20000W इलेक्ट्रिक स्कूटर
एक व्यक्ति को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बोक्न को वजन सीमा सामान्यतया स्कूटर को मोडेल मा निर्भर गर्दछ। सामान्यतया, अधिकतम बोक्ने क्षमता 110 किलो (240 पाउण्ड) बाट 140 किलो (285 पाउण्ड) सम्म हुन्छ। जे होस्, त्यहाँ केहि निर्माताहरु अब ई स्कूटरहरु कि २0० किलोग्राम (५70० पाउण्ड) मा माग को कारण बोक्न सक्छ बनाइरहेका छन्।
इलेक्ट्रिक स्कूटर को कोही द्वारा सवार हुनुहुन्न जो निर्माता को सिफारिश भन्दा बढी तौल को रूप मा स्कूटर को प्रदर्शन सम्भवतः सम्झौता गरिनेछ। तेसैले यदि तपाइँ एक वयस्क हुनुहुन्छ कि भारी पक्ष मा छ, तब तौल सीमा एक महत्वपूर्ण कारक हुनेछ जब एक स्कूटर छनौट।
१ टुक्रा मूल्य: 2245 USD प्रति टुक्रा
10 टुक्रा मूल्य: 2145 डलर प्रति टुक्रा
ब्याट्री क्षमता 72V 40Ah (वैकल्पिक को लागी 45Ah) 72V 70Ah (वैकल्पिक को लागी 100Ah)
कसरी इलेक्ट्रिक स्कूटर दायरा बढाउन
दायरा शायद एक इलेक्ट्रिक स्कूटर मा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र लालसा सुविधा हो। अधिकांश मानिसहरु को यात्रा अत्यधिक आफ्नो ई स्कूटर को दायरा बाट प्रभावित छ।
धेरै जसो प्रयोगकर्ताहरु, तेसैले, रस को लागी धेरै स्कुटरहरु बाट सकेसम्म धेरै दायरा को लागी बाटो खोजिरहेका छन्। त्यहाँ तपाइँको इलेक्ट्रिक स्कूटर को बाहिर अधिक दायरा सुरक्षित गर्न को लागी धेरै तरिकाहरु छन्:
The इष्टतम मोड र गति मा सवारी
The टायर Inflating
The ब्याट्री अपग्रेड गर्दै
An एक अतिरिक्त ब्याट्री छ
· सफाई र तपाइँको स्कूटर को रखरखाव
· मोटर रिवाइन्ड/ताजा
The समग्र वजन कम गर्नुहोस् तपाइँको ई स्कूटर सहन छ
Sure सुनिश्चित गर्नुहोस् कि कुनै पनि अनावश्यक इलेक्ट्रोनिक्स बन्द छन्।
यी शायद सबैभन्दा स्पष्ट चीजहरु तपाइँ अधिक दायरा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ ब्याट्री को जीवन लाई सकेसम्म धेरै सुधार गर्न मा विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
यो बिभिन्न मोडेलहरु बीच फरक हुन सक्छ, तर तथ्य यो हो कि तपाइँ ढिलो, बिजुली बचत मोड मा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर संग बिजुली बचत मोड मा क्रूज गर्नु पर्छ, र एक महँगो, उच्च अन्त मोडेल संग धेरै छिटो।
धेरै जसो बिजुली स्कूटरहरु, विशेष गरी आधुनिक मोडेलहरु, बिरलै मोटर रिवाइन्डि need को आवश्यकता पर्नेछ। यो एक जटिल यांत्रिक प्रक्रिया हो। तेसैले यदि आवश्यकता उत्पन्न हुन्छ, तपाइँ तपाइँको ई स्कूटर एक पेशेवर लाई लिन चाहानुहुन्छ, खास गरी यदि तपाइँ DIYs मा राम्रो हुनुहुन्न वा तपाइँ यो गर्न को लागी सबै उपकरणहरु छैन।
बिजुली स्कूटर दुनिया भर मा शहरहरु मा लोकप्रियता मा प्राप्त गरीरहेछन्। उनीहरु पर्यावरण मैत्री छन्, ट्राफिक अवस्था बाट प्रभावित छैनन्, र उनीहरुलाई सजीलै रिचार्ज गर्न सकिन्छ जब प्रयोग मा छैन। त्यो भनिएको छ, केहि मानिसहरु लाई तथ्य हो कि धेरै इलेक्ट्रिक स्कूटर पोर्टेबल र हल्का वजन को कारण बाट बन्द हुन सक्छ किनकि उनीहरु आफैं अलि भारी छन् र यकीन छैन कि एक ई-स्कूटर उनीहरुलाई समर्थन गर्न सक्छन्।
जे होस्, जसरी बिजुली स्कूटर समय संगै सुधार भएको छ, त्यहाँ अब धेरै ई स्कूटर मोडेल उपलब्ध छन् कि भारी वयस्कहरु लाई समायोजित गरीएको छ।
एक भारी शुल्क इलेक्ट्रिक स्कूटर को लाभ के हो?
एक भारी शुल्क इलेक्ट्रिक स्कूटर मात्र एक भारी तौल संग एक व्यक्ति बोक्न सक्षम हुनेछ, तर यो पनि सजीलै बिभिन्न भूभाग पार, जस्तै बन्द सडक वा उकालो। उदाहरण को लागी, १५०० वाट को बिजुली संग एक इलेक्ट्रिक स्कूटर २ 27० किलोग्राम (४५० पाउण्ड) को एक व्यक्ति को वजन आराम संग संभाल गर्न को लागी सक्षम हुनु पर्छ।
जे होस्, जसरी यी स्कूटरहरु मामूली भारी छन्, कमजोरी छ कि हल्का स्कूटरहरु को तुलना मा, तपाइँ सजिलै संग यी उठाउन र तिनीहरूलाई टाढा गर्न सक्षम हुनुहुने छैन।
एक भारी शुल्क इलेक्ट्रिक स्कूटर को हानि के हो?
वजन समायोजित गर्न को लागी दोष
धेरै बिजुली स्कूटर दिमाग मा सवार सवार संग बनाइन्छ, त्यसैले यदि तपाइँ एक भारी वयस्क हुनुहुन्छ, एक बिजुली स्कूटर को लागी तपाइँको विकल्पहरु सीमित छन्। अतिरिक्त तौल को समायोजन को लागी, केहि भारी शुल्क ई स्कूटरहरु प्रमुख कमीहरु छन्, जस्तै UL प्रमाणित नहुनु, जुन विश्व मा शीर्ष रेटेड सुरक्षा प्रमाणीकरण हो।
एक भारी शुल्क बिजुली स्कूटर कसैलाई जो यो बोक्न को लागी आवश्यक छैन को लागी ठीक छ, तर यदि तपाइँ सार्वजनिक यातायात मा तपाइँको बिजुली स्कूटर बोक्न आवश्यक छ, यो धेरै भारी हुन सक्छ। 240kg (565 lbs) को अधिकतम सवार क्षमता र मात्र 62 किलो वजन संग, haibadz k15 जस्तै एक ई स्कूटर एक हल्का विकल्प हो।
भारी शुल्क बिजुली स्कूटर बनाउन को लागी अधिक लागत छ किनकि उनीहरुलाई अधिक भागहरु लाई एक भारी वजन समात्न को लागी सक्षम हुन को लागी आवश्यक छ। उदाहरण को लागी, धेरै भारी शुल्क ई स्कूटर एक दोस्रो मोटर वा ठूलो टायर हुनेछ, जो न केवल स्कूटर को तौल बढ्छ, तर लागत।
एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को लागी अधिकतम वजन सीमा किन महत्त्वपूर्ण छ?
यो महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाइँ भारी सामानहरु लाई तपाइँ संग बोक्ने योजना बनाउनुहुन्छ, जस्तै एक ब्याकप्याक वा एक शपिंग झोला। त्यो अतिरिक्त तौल तपाइँ अधिकतम वजन सीमा मा टिप गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो तपाइँको बिजुली स्कूटर बिगार्न सक्छ। एउटै भारी वयस्क को लागी लागू हुन्छ। यही कारणले यो ई स्कूटर को वजन सीमा को निर्माता को सिफारिश को पालन गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ।
तपाइँ भारी वयस्कहरु को लागी बिजुली स्कूटर कहाँ किन्न सक्नुहुन्छ?
त्यहाँ धेरै भारी शुल्क बिजुली स्कूटर उपलब्ध छन् कि तपाइँ अनलाइन आफ्नो वजन र जीवन शैली अनुरूप पाउन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ 150 किलोग्राम (315 पाउण्ड) को मुनि तौल गर्नुहुन्छ, रेन वन बिजुली स्कूटर तपाइँ समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ, र स्कूटर मात्र 62 किलोग्राम वजन हुन्छ। यो कार्बन फाइबर र विमान ग्रेड एल्युमिनियम फ्रेम बलियो छ तर हल्का सवार आराम संग यात्रा गर्न को लागी अनुमति दिन्छ।
न केवल यो 250 किलो सम्म बोक्न सक्षम छ, तर यो पनी फोल्ड गर्न, उठाउन र सार्वजनिक यातायात वा माथिल्लो तलामा लैजान सक्षम छ। यसको शक्तिशाली बिजुली मोटर र लिथियम आयन ब्याट्री यो तपाइँको दैनिक यात्रा को लागी आदर्श इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाउँछ।
यहाँ electricscooterhaiba.com मा हामी समीक्षा र परीक्षण जब हामी मौका पाउँछौं, धेरै लामो समय देखि बिजुली स्कूटरहरु - त्यसैले यदि तपाइँ सोध्नुहुन्छ कि अधिकतम लोड के हो कि वयस्क बिजुली स्कूटरहरु को अधिकांश सुविधा हामी कोरस "420 पाउण्ड!" । के यो मतलब छ कि 420 पाउण्ड भन्दा भारी मान्छे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर सवारी गर्न सक्दैनन्?
होइन, यो गर्दैन!
यो सत्य हो कि बजार मा बिजुली स्कूटर को अधिकांश एक 220 पाउण्ड अधिकतम लोड सुविधा, तर त्यहाँ अपवाद छन् किनकि त्यहाँ वयस्क बिजुली स्कूटर हो कि 320 पाउण्ड र अझ धेरै बोक्न सक्छ - र यदि ती मध्ये केहि साँच्चै महंगा छन्, त्यहाँ पनि केहि अधिक किफायती मोडेलहरु छन्।
भारी वयस्कहरु को लागी बिजुली स्कूटर मात्र एक उच्च अधिकतम लोड सुविधा छैन। त्यहाँ अन्य समस्याहरु छन् कि उच्च वजन संग सवारहरु लाई सामना गर्न सक्छन् जब उनीहरु एक मानक ई स्कूटर सवारी। उदाहरण को लागी, स्कूटर गति मात्र स्कूटर मोटर मा निर्भर गर्दैन। भूभाग को प्रकार र सवार को वजन स्कूटर धेरै ढिलो गर्न सक्छ, त्यसैले भारी मानिसहरु को लागी एक बिजुली स्कूटर एक शक्तिशाली व्यक्ति बोक्दा गति र प्रदर्शन को ग्यारेन्टी गर्न को लागी पर्याप्त शक्तिशाली हुनु पर्छ।
साथै, वयस्कहरु अक्सर यात्रा को लागी आफ्नो बिजुली स्कूटर को उपयोग गर्दछन् ताकि उनीहरु 'एक सपाट भू -भाग मा सबै समय सवार हुने छैनन्। एकै समयमा, सवार को वजन ब्याट्री जीवन लाई असर गर्न सक्छ। यी सबै कारणहरु को लागी, भारी वयस्कहरु को लागी एक बिजुली स्कूटर दुबै सपाट भूभाग र माथिल्लो, राम्रो गति र ब्याट्री जीवन मा प्रदर्शन को ग्यारेन्टी हुनुपर्छ।
इलेक्ट्रिक स्कूटरहरु किन यति लोकप्रिय छन्?
२०१ In मा अमेरिकामा मात्र ४१ मिलियन इलेक्ट्रिक स्कुटर राइड लिइएको थियो। यो तथ्याistic्क मात्र सवारी शेयर स्कूटर सवारी को लागी लागू हुन्छ। यो निजी स्वामित्वमा इलेक्ट्रिक स्कूटरहरु द्वारा लिइएको सवारी समावेश गर्दैन। तेसैले, यो भन्न को लागी सुरक्षित छ कि कुल मा, राम्रो संग 41 मिलियन इलेक्ट्रिक स्कूटर सवारी त्यो वर्ष लिईयो।
इलेक्ट्रिक किक स्कूटर को जबरदस्त लोकप्रियता को कारण धेरै हुन सक्छ। त्यहाँ, तथापि, एक एकल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो कि ई-स्कूटर बूम को लागी नेतृत्व गरेको छ-यो "प्रयोगमा सहजता" हो।
अन्ततः, "उपयोग को सहजता" जीत
आजकल, जब यो यातायात को लागी आउँछ, त्यहाँ व्यक्तिगत गतिशीलता उपकरणहरु को एक अनन्त संख्या हो कि तपाइँ बिन्दु A बाट बिन्दु B लाई कुनै पनि शहर भित्र लिन सक्नुहुन्छ।
निस्सन्देह यातायात को एक धेरै लोकप्रिय मोड। मानव संचालित, बिजुली, dockable वा dockless-संभावनाहरु तपाइँ सवार हुनुहुन्छ वा कम से कम ती सबै देखीरहनुभएको छ।
यो भन्न को लागी सुरक्षित छ कि लगभग सबैलाई थाहा छ कसरी एक साइकल सवारी गर्न को लागी। तेसैले, एक साइकल मा कूद र तपाइँको छनौट को एक गन्तव्य को लागी आफैलाई सरल र रमाईलो हुनु पर्छ।
एक संदेह बिना, साइकल धेरै फाइदाहरु प्रदान गर्दछ, तर उनीहरुसंग एक एकल कमजोरी छ कि उनीहरुलाई पछाडि समातेर छ। उनीहरु ठूला छन्, यस कारण को लागी उनीहरु सजीलै शहर को आसपास इलेक्ट्रिक स्कूटर को रूप मा manoeuvrable छैनन्।
साइकलको साइजले ती स्थानहरु को संख्या लाई सीमित गर्दछ जहाँ उनीहरुलाई पार्क गर्न सकिन्छ। उनीहरु पक्कै पनी सजीलै कहीं पनी छोड्न सकिदैन तपाइँ चाहानुहुन्छ।
व्यक्तिगत hoverboards केहि बर्षहरु को लागी वरिपरि छन्। तिनीहरू हल्का, अपेक्षाकृत सस्तो र सवारी गर्न को लागी धेरै रमाईलो छन्। दुर्भाग्यवश, उनीहरुसंग केहि कमीकमजोरीहरु छन् जुन उनीहरुको लोकप्रियता तल समात्न सक्छ।
कारण आफ्नो डिजाइन को प्रकृति को लागी, hoverboards अपेक्षाकृत सानो ब्याट्री जो गम्भीर रूप मा आफ्नो दायरा सीमित मा भरोसा गर्नु पर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कारक तथ्य हो कि आदेश मा एक hoverboard सवारी गर्न को लागी, तपाइँ पहिले यो सवारी गर्न को लागी जान्नै पर्छ। यो गाह्रो छैन, तर यो पक्कै पनी केहि छैन कि धेरै जसो मानिसहरु लाई थाहा छ कि कसरी गर्ने छ, जस्तै एक साइकल सवारी।
Hoverboards पनि एक सीमित वजन बोक्ने क्षमता छ। यदि तपाइँ एक hoverboard मा धेरै धेरै वजन राख्नुहुनेछ, यो कहीं सार्ने छैन। यो त्यति नै सरल छ।
यी सबै कारकहरु यो उनीहरु लाई कहिल्यै मुख्यधारा बन्न को लागी धेरै सम्भावना छैन।
मोपेड र सीट मा स्कूटर
मोपेड र एक सीट संग परम्परागत स्कूटर, एक मोटरसाइकल जस्तै, धेरै दशकहरु को लागी वरिपरि छन्। उनीहरु अतीत मा अधिक लोकप्रिय हुन को लागी प्रयोग गरीयो, तर अझै पनी सामान्यतया केहि स्थानहरु मा प्रयोग गरीन्छ। उनीहरु किसान को बजार मा छिटो किनमेल गर्न वा समुद्र तट मा जाने को लागी यातायात को एक महान मोड हो।
मोपेड अपेक्षाकृत छिटो र सवारी को लागी रमाईलो छ। तपाइँ उनीहरुलाई फुटपाथ मा सवारी गर्न सक्नुहुन्न, यसको सट्टामा तपाइँ कारहरु संगै सडक मा सवारी गर्नु पर्छ। यसले उनीहरुलाई तपाइँको गन्तव्य को लागी एक छिटो, अन्तिम माइल यात्रा को लागी एक छनौट को कम बनाउँछ।
त्यहाँ राइडशेयर सेवाहरु छन् कि स्कूटरहरु को यी प्रकार प्रदान गर्दछ। जे होस्, यी स्कूटरहरु को अधिकांश शहर भर मा अपेक्षाकृत लामो दूरी को यात्रा को लागी प्रयोग गरीन्छ, जसको लागी एक इलेक्ट्रिक किक स्कूटर को उपयोग धेरै बोझिला हुनेछ।
अर्को कारक जुन सम्भवतः यी स्कूटरहरु को लोकप्रियता तल राखी रहन सक्छ तथ्य यो हो कि सबैलाई कार र ट्रक को छेउमा सडक मा सवारी को विचार को लागी खुल्ला महसुस हुनेछ।
एक अपेक्षाकृत सानो व्यक्तिगत यातायात वाहन कल्पना गर्नुहोस् कि हल्का, सजीलो manoeuvrable छ, केहि हद सम्म अधिक भार भार बोक्न सक्छ, र/बन्द हप गर्न धेरै सजिलो छ। त्यो सबै को अतिरिक्त, यो पनि सवारी गर्न साँच्चै रमाईलो छ।
चूंकि यो अपेक्षाकृत सानो छ, तपाइँ यसलाई व्यावहारिक रूप बाट कहीं पनी एक पार्किंग स्थल वा एक निर्दिष्ट भण्डारण क्षेत्र को केहि अन्य रूप को लागी बिना छोड्न सक्नुहुन्छ। यो सानो आकार को मतलब यो पनि छ कि बिजुली स्कूटर लगभग जताततै उपलब्ध छन्, जसले यसलाई सजिलो बनाउँछ र एक मा हप गर्न को लागी लुकाउन को लागी पनि विशेष गरी एक को लागी हेर्न को लागी बिना।
इलेक्ट्रिक स्कूटरहरु को उपयोग गर्न को लागी धेरै सजिलो छ। लात स्कूटर सुपर प्रयोग गर्न सजिलो छ। लगभग सबैलाई थाहा छ कसरी एक लगभग intuitively सवारी गर्न को लागी।
मलाई मेरो पहिलो पटक याद छ जब मैले एक ई-स्कूटर भाडामा लिएको थिएँ। म लगभग १० सेकेन्ड को लागी थोरै चिन्तित थिएँ। मैले यसलाई उठाउन को लागी यो को एक राम्रो अनुभूति प्राप्त गर्न को लागी कोशिश गरें र त्यसपछि कुनै समस्या बिना hopped। सवारी को बारे मा २ मिनेट पछि म आराम र अब चिन्ता लाग्यो। एक बिजुली स्कूटर सवारी गर्न सिक्न सहज र सुपर सजिलो थियो। कल्पना को एक सानो खुराक संग म पनी मेरी आमा स्थानीय किराना पसल मा एक सवारी कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ।
यस तथ्य को बावजुद कि स्कूटर ले मलाई जहाँ म कुनै समय मा जान चाहन्थे, सवारी रमाईलो पनि थियो। मँ यो को शुद्ध आनन्द को लागी एक स्कूटर सवार देख्न सक्छु।
तथ्य यो हो कि उनीहरु सुपर प्रयोग गर्न सजिलो छ र लगभग जताततै पार्क गरीएको छ, इलेक्ट्रिक स्कूटरहरु यति लोकप्रिय बनाउँछ।
उदाहरण को लागी, मेरो भर्खरको गुआंगझाउ, चीन को यात्रा लिनुहोस्। मेरो अपार्टमेन्ट करीव सबवे स्टेशन बाट meters०० मिटर (आधा माईल भन्दा कम) को बारे मा स्थित थियो। हरेक बिहान जब मेरो अपार्टमेन्ट भवन छोडेर, म मेट्रो को लागी प्राप्त गर्ने विकल्पहरु को एक जोडी थियो: १) पैदल हिड्ने, २) कल ट्याक्सी वा अर्डर
ठिक छ, म धेरै पटक मात्र हिँडेको कारण मात्र म मेरो आफ्नै मांसपेशिहरु को उपयोग गरेर वरिपरि घुम्न मन पराउँछु, तर चूंकि मौसम धेरै तातो थियो ती दिनहरु (३CC [F FF]) म विशेष गरी को लागी घाममा बाहिर हुन पाउँदा रोमाञ्चित थिएन। कुनै पनी धेरै लामो म हुनु पर्छ।
मैले कहिल्यै ट्याक्सी बोलाइनँ, केवल यो कारणले कि मँ कार को लागी मेरो स्थान मा पुग्न 8 देखि 10 मिनेट पर्खनु पर्ने हुन्छ, तब ड्राइभर लाई बुझाउनुहोस् कि मलाई मात्र आधा माइल जानु पर्छ। त्यो मात्र ठीक लाग्दैन।
म भन्न चाहन्छु कि मैले स्कुटर जति पटक पैदल हिँडेको छु त्यति नै पटक लिएको छु। प्रत्येक पटक मैले स्कूटर भवनको प्रवेश द्वार बाहिर पार्क गरेको देखेँ, मँ बस स्क्यान गर्न, हप र मेट्रो स्टेशन को सवारी को लागी एक आग्रह थियो।
स्कुटर भाडामा लिएर पैदल हिड्ने स्टेशन जत्तिकै सहज थियो। मँ दिनहरुमा स्कुटर मा हप गर्न को लागी अधिक सम्भावना हुनेछ जब म अलि ढिलो चलिरहेको थियो।
त्यसोभए, दिन को अन्त्य मा जब म अपार्टमेन्ट मा आउँदै थिएँ, पाँच वा छ इलेक्ट्रिक स्कूटर सधैं मेट्रो स्टेशन द्वारा पार्क गरीएको थियो, मलाई घर लिन को लागी पर्खिरहेको थियो। र तपाइँलाई थाहा छ? म उनीहरु मध्ये एक मा हप र सीधा घर सवारी गर्न को लागी अधिक सम्भावना थियो।
सुरुमा, प्रश्न को जवाफ किन इलेक्ट्रिक स्कूटरहरु यति लोकप्रिय बन्न को लागी स्पष्ट नहुन सक्छ। जे होस्, ध्यान दिएर पेशेवरहरु र बिजुली किक स्कूटर को प्रमुख प्रतियोगीहरु मध्ये प्रत्येक को विपक्ष मा विचार गरेपछि, यो बिल्कुल स्पष्ट हुन्छ किन इलेक्ट्रिक स्कूटर जितेको छ।
अघिल्लो: 2021 नवीनतम 11 इन्च स्कूटर वयस्कहरु को लागी 5600w-10000W बिजुली स्कूटर
अर्को: 2021 ठूलो इलेक्ट्रिक बाइक 20000w इलेक्ट्रिक स्कूटर वयस्क
trotinette electrique 5000w ， monopattino eletrico ， monopattino फ्रीस्टाइल
ई स्कूटर trotinette electrique/स्कूटर elettri ...
२०२१ नयाँ फैशनेबल २ पा wheel्ग्रा बिजुली स्कूटर w ...
२ पाels्ग्रा स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर रंग lig संग ...
दुई संग अन्तर्राष्ट्रिय संस्करण इलेक्ट्रिक स्कूटर ...
२०२१ सबैभन्दा नयाँ ठूलो मोटर इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक tr ...
Bicicletta इलेक्ट्रिक स्कूटर तह ई स्कूटर ख ...